Na ịgbatị Digital Reach na Mobile-first, Post-Cookie World | Martech Zone
Ka omume ndị na-azụ ahịa na-aga n'ihu na-aga n'ụzọ dị egwu na ngwaọrụ mkpanaka, ndị na-ere ahịa ika agbanweela uche ha na atụmatụ azụmaahịa ekwentị. Na, ebe ọ bụ na ndị na-azụ ahịa na-eji ngwa ngwa na ekwentị ha, ọ bụghị ihe ijuanya na mgbasa ozi ngwa na-enye iwu ọdụm nke mgbasa ozi mkpanaka. N'elu oria ojoo, mgbasa ozi mgbasa ozi na-aga n'ihu iji hụ mmụba 20 pasent na 2020, dị ka eMarketer.
Mana ọtụtụ mmadụ na-eji ọtụtụ ngwaọrụ ma na-eri mgbasa ozi n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche, ọ bụ nsogbu nye ndị ahịa iji ghọta njirimara nke onye na-azụ ahịa n'ofe ala dijitalụ ha niile. Kuki ndị ọzọ ejibu ụzọ mbụ iji soro ndị na-azụ ahịa na-emekọrịta site na ọwa mmekọrịta na dijitalụ; agbanyeghị, kuki abịala n'okpuru mmachi na-arịwanye elu sitere n'aka ndị na-eweta ihe nchọgharị ndị ọzọ dị ka Google, Apple na Mozilla. Google ekwuputala na ọ ga-ewepụ kuki ndị ọzọ na Chrome site na 2022.
Njirimara Mgbasa Ozi Mobile
Dika ndi ahia ahia na acho uzo ozo iji mata ndi ahia na gburugburu kuki-kuki, ndi na ere ahia na agbanwezi uzo dijitalụ ha NJ ID mgbasa ozi (MAIDs) iji jikọta omume ndị ahịa n'ofe ngwaọrụ. MAID bụ ihe nchọpụta pụrụ iche e kenyere na ngwaọrụ mkpanaka ọ bụla yana ijikọ MAID na njirimara ndị dị mkpa dị ka afọ, okike, ngalaba ego, wdg. Bụ otu ndị mgbasa ozi nwere ike isi rụọ ọrụ ọdịnaya dị mkpa gafere ọtụtụ ngwaọrụ - nkọwapụta nke ahịa azụmaahịa dijitalụ dijitalụ.
Omenala ndị na-enweghị ntanetị nke ndị ahịa na-adabere dịka nọmba ekwentị, adreesị, wdg. Enweghị ike dakọtara maka ụlọ profaịlụ site na data dijitalụ naanị. Nchọpụta amata na-enyere aka mejupụta oghere a ma jiri algorithms dị mgbagwoju anya chọpụta ma akara njirimara njirimara niile bụ nke otu onye. Lọ ọrụ ndị dịka ọkachamara n’ịmara njirimara njirimara Infutor na-ewu ụdị njirimara ndị a dị n'ịntanetị na n'ịntanetị. Onye na - eme ihe nzuzo na-achịkọta data nnabata nzuzo, yana data sitere na isi mmalite ndị ọzọ dị ka usoro ndụ ndị ọzọ na-eweta data data na data CRM nke mbụ, wee jikọta ya na profaịlụ dị ike nke ndị ahịa.
Ewebata Total Mobile Ad NJ si Infutor
Infutor si Total Mobile Ad NJ ngwọta bụ ụzọ dị mkpa iji nyere ndị na-ere ahịa mejupụta oghere njirimara kuki-kuki site na ị nweta aha njirimara na-enweghị PII na adreesị ozi-e. Nke a na-enyere ndị ahịa aka iwulite profaịlụ njirimara nzuzo na-ekwenye na ha na-erute ndị nwe ngwaọrụ ha chọrọ iru.
Akwadoro ya site na TrueSourceTM Ngwaọrụ Dijitalụ eserese, Akwụkwọ Nchịkọta Mobile Mobile Ad Niile gụnyere ịnweta 350 nde ngwaọrụ dijitalụ na ijeri email MAID / hashed abụọ. Nke a Ad Ad NJ na hashed email (MD2, SHA5, na SHA1) nchekwa data dị na nzuzo, na-enweta ikike. Ihe njirimara ndị a na-enweghị aha na-echebe ozi njirimara nke onwe (PII) ka ha na-enyere ndị ahịa aka idozi na jikọọ njirimara ndị ahịa dijitalụ gafee nyiwe yana n'ime njirimara njirimara mbụ ha.
Infutor si niile Mobile Ad NJ azịza na-enye ndị na-azụ ahịa ihe nchekwa agbakwunyere na ịnweta ohere ngwangwa ngwangwa. Ihe ngwọta na-enye akụkụ ọzọ nke data nke na-eme ka ndị na-ere ahịa rute site na njirimara dijitalụ na mkpebi ngwaọrụ iji gbochie PII nke mbụ. Nke a na - enyere izizi ozi oznichannel aka site na ịkwalite nkewa nke ndị na - ege ntị na ịhazi onwe onye maka ahụmịhe ndị ahịa bara uru.
Total Mobile Ad NJ data na-rigorously ọcha na enwetara site na ikike dabere na ngwa site na otutu tụkwasịrị obi isi mmalite, huu nke kachasi mma nke dijitalụ data. Akara Nkwenye (1-5) na-eji algorithm nwere ikike iji ihe ndị dị ka ugboro na nlọghachi nke MAID / hash na abụọ a na-ahụ ọnụ, na mgbakwunye na syntax na nkwado ndị ọzọ ka ndị ahịa wee mara ihe puru omume nke otu ụzọ na-arụ ọrụ.
Ibute MAIDs Data Na-arụ Ọrụ
Ihe ikpo okwu mgbanwe data BDEX na-achikota data site na otutu uzo ma na-ehicha ya nke oma iji hu na ihe ziri ezi na ego nke ihe omuma ya. Ihe ngosi BDEX Identity Graph nwere ihe kariri puku ijeri data data ma nye ndi oru ahia aka ichota onye ahia n’azu data data.
Na mmekorita ya na Infutor, BDEX webatara data ngụkọta nke MAIDs webatara data mgbanwe. Nke a mụbara olu nke data njirimara BDEX nke dijitalụ iji nye ụdị na ndị ahịa ohere ịnweta nchịkọta zuru ezu nke MAID / hashed email abụọ. N'ihi ya, BDEX emeela ka dataset dijitalụ sie ike ọ nwere ike ịnye ndị ahịa site na ịbawanye ọnụ ọgụgụ NJ ad mobile na hashed adreesị email na mbara igwe ya.
N'ime ụwa data na-achọ ihe ndị ọzọ maka ịchekwa dijitalụ kuki, mmekọrịta BDEX-Infutor dị n'oge. E wuru mgbanwe data anyị iji nye ike njikọta mmadụ na Infutor's Total Mobile Ad ID Solution bụ mgbakwunye siri ike iji nyere anyị aka ijere mkpa ahịa a na-eto ngwa ngwa.
David Finkelstein, onye isi oche nke BDEX
Nweta Infutor si niile Mobile Ad NJ azịza, nke a kwadoro na nke dị n'ọtụtụ nkwupụta nnyefe, bụ mmeri maka ndị na-ere ahịa na-achọ data zuru oke na nke ugbu a. Ndị na-ere ahịa na-eji data mkpanaka a bara ụba iji gbasaa ohere ha site na iji njirimara dijitalụ iji lekwasịrị ndị na-azụ ahịa gafere ngwaọrụ mkpanaka anya, mepụta izipu ozi omnichannel na-agbanwe agbanwe, meziwanye ọnụego mbata maka ọnụọgụ dijitalụ na mmemme na inye ikike njikọ ngwaọrụ na mkpebi njirimara.
na a mobile-mbụ, post-kuki ụwa, ndị ahịa dijitalụ na-aga nke ọma na-eji data eserese njirimara na mkpebi amata iji nye aka na ngwaọrụ niile na ahụmịhe nke onwe nke ndị ahịa chọrọ. Ihe siri ike MAIDs dị oke mkpa iji meziwanye njirimara njirimara na ụlọ profaịlụ na-anọghị n'ịntanetị na gburugburu kuki kuki ma na-enye nkwekọ dị mkpa nke na-eme ka ọnụego ntụgharị gbanwee ma na-abawanye ROI nke ịzụ ahịa dijitalụ.
Gụkwuo Banyere Infutor's Total Mobile Ad ID Solution
Tags: ad idBDEXkuki-obereInfutor Total Mobile Ad NJnwanyịụmụ odibonjirimara ad mobileids mgbasa ozi mkpanakamobile-mbụon-premiseTotal Mobile Ad NJ